AutoSEO vs FullSEO: Kedu Semalt SEO Ọrụ I Kwesịrị Selecthọrọ?
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta bụ isiokwu dị aghụghọ. Ọ bụ ezie na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ azụmaahịa niile na-atụkwasị obi ugbu a na SEO itinye nzukọ ha n'ihu anya aka nri, ọ bụkwa eziokwu na ọ bụ naanị obere njinia maara nke ọma ihe Google na ndị isi ihe nchọta ndị ọzọ chọrọ. Iji mee ka ọkwa egwuregwu ahụ dị, igodo iji nyocha njikarịcha nyocha bụ ihe nzuzo echedoro nke ọma.
Nke a pụtara na ngwá ọrụ SEO na omume kachasị mma esiteghị na ntinye ntuziaka nke Google nyere, mana site na ịnwale ihe na-arụ ọrụ na nke anaghị arụ ọrụ. The na-arụkwu ọrụ ị na-eme na njikarịcha ọchụchọ, na-emewanye ihe achọrọ, mkpa na mmasị nke isi ihe nchọta ọchụchọ.
Na Semalt anyị ejirila afọ 10 na-achịkwa nkà SEO anyị. Anyị enyochaala ihe dị ka ebe nrụọrụ weebụ nde 1.5 ma na-anya isi ndị ọrụ 600,000 edebanyere aha. Anyị nwere nghọta miri emi banyere ihe ọ ga - ewe iji nweta nzukọ gị ọ bụghị naanị na peeji nke Google, mana ruo n'isi ọkwa ahụ. N'ime afọ iri gara aga, anyị rụsiri ọrụ ike ịbụ onye na-eweta SEO nke nhọrọ maka ọtụtụ ndị otu na-eduga.
Kedu nke n’ime ọrụ SEO anyị ka ị ga-ahọrọ? Taa, anyị ga na-ele anya na ngwugwu AutoSEO na FullSEO ; ọdịiche, myirịta, yana otu ị ga - esi mata nke ga - eme gị mma.
Gini bu AutoSEO na FullSEO?
Ihe mbu bu gini: gini bu AutoSEO na FullSEO?
N'elu ọkwa sara mbara, AutoSEO na FullSEO bụ ngwaahịa abụọ bu n'uche ime otu ihe: bulie weebụsaịtị gị iji meziwanye ogo ọchụchọ ọchụchọ gị. Ha bụ ngwaahịa nke anyị na Semalt mepụtara n'ime ụlọ, nke ọ bụla azụmahịa ejirila ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba niile dị n'ụwa.
Mana ụdị myirịta ndị a dị na ya, ngwaahịa a na-amalite imebi.
AutoSEO bụ ngwaọrụ eji eme ihe nke nwere akọ na-anọchite anya ngwungwu ọkwa anyị. Emebere AutoSEO maka onye ọ bụla na-ebute nzọụkwụ mbụ ha n'ime ụwa nke SEO ma tinye onye ọrụ.
FullSEO bụ ngwugwu SEO anyị zuru ezu. Ezubere ya maka onye ọ bụla dị njikere iji nyocha njikarịcha ọchụchọ dị oke mkpa ma na-achọ nsonaazụ kacha mma, kachasị ọsọ na ọdụ ga-adịgide. Can nwere ike ịhapụ anyị ihe niile dị elu na-ebuli anyị elu, dịka ndị ọrụ FullSEO na-enweta ohere ịnweta ndị otu anyị nke ndị ọkachamara SEO.
Ka anyị lebagodị anya na azịza ndị a, ma lelee otu esi arụ ọrụ nke ọ bụla.
Ntụziaka maka AutoSEO
Want chọrọ ịbawanye visibiliti na ire ahịa? You na-ewere nzọụkwụ mbụ gị n'ime ụwa nyocha njikarịcha ọchụchọ. Wantchọrọ ịhụ nsonaazụ ụfọdụ tupu i tinye ego na nnukwu ego?
AutoSEO nwere ike ịbụ ngwaahịa maka gị.
Ezubere ngwugwu ngwugwu nke Semalt maka azụmahịa nke chọrọ ịba ụba okporo ụzọ saịtị, mana achọghị itinye ego na nkwalite saịtị na mbido mbụ, ọbụlagodi ruo mgbe ha hụrụ ezigbo nsonaazụ. AutoSEO na-etinye gị n'oche ọkwọ ụgbọ ala, na-enye gị ohere ịmalite mkpọsa SEO maka obere ihe US $ 0.99.
Kedu ka AutoSEO si arụ ọrụ?
Ka anyị leba anya na mmebi nke otu esi arụ ọrụ AutoSEO.
Ndebanye aha: begin na-amalite usoro ahụ site na dejupụta mpempe akwụkwọ ndebanye AutoSEO dị mfe.
Nchịkọta weebụsaịtị: A na-enyocha ebe nrụọrụ weebụ gị, na AutoSEO ga-akọ akụkọ nke ọma na saịtị gị mere nke ọma megide iwu weebụsaịtị yana ụkpụrụ ụlọ ọrụ SEO.
Mmepe atụmatụ: Iji otu n'ime ndị ọkachamara SEO dị elu na-arụ ọrụ, onye njikwa Semalt gị ga-arụ ọrụ nyocha sara mbara nke weebụsaịtị gị, wee mepụta ndepụta nke njehie na adịghị ike ndị ọ dị mkpa idozi.
Ebugharị nkwenye maka mmezi akụkọ: Ozugbo enyere anyị ikikere nnyefe faịlụ (FTP) ma ọ bụ ohere nchịkwa nke CMS, ndị injin anyị ga-ewepụta ndụmọdụ ndị a tụrụ iji kwado nkwa maka AutoSEO nke ọma.
Nyochaa isiokwu: Otu injinia SEO mepụtara ndepụta nke isiokwu ị ga-etinye na ebe nrụọrụ weebụ gị, ahọrọ iji mee ka ahịa na okporo ụzọ dịkwuo elu.
Buildinglọ njikọ njikọta : AutoSEO na-amalite itinye njikọ sitere n'okike na - esite na isi mmalite ndị a tụkwasịrị obi na saịtị gị niile, na-abawanye visibia nchọta ya. Semalt nwere ebe nchekwa data ihe karịrị 50,000 saịtị saịtị ndị mmekọ dị elu, ma ahọpụtara njikọ dabere na afọ ngalaba yana TrustRank. A na-arụ ụlọ a na-ejikọ ọnụ na njikọ dị ka usoro a: njikọta aha aha 10%, njikọta arịlịka 40%, njikọ na-abụghị ihe arịlịka.
Ndepụta mkpọsa: ị na -achọ ihe ịga nke ọma n'ọwa mgbasa ozi gị site na mmelite ọkwa ụbọchị niile nke ndepụta aha akwalitere.
Nlekọta na-aga n'ihu : AutoSEO na-aga n'ihu na-enyocha ọganihu nke mkpọsa ahụ, na-enye akụkọ site na email ma ọ bụ sistemụ ngosipụta nke ime.
Ọnye na-bụ AutoSEO?
Ezubere AutoSEO maka ndị chọrọ ịmụtakwu ntakịrị banyere SEO tupu ha etinye nnukwu ego. Ọ bụ maka ndị na - anwale ya na ndị na - enweghị atụ na - enwe mmasị na nghọta na njikwa. Ọ bụ maka onye ọ bụla chọrọ ibido njem SEO ha n’ụzọ dị ọnụ ahịa ma zie ha ozi.
Ntuziaka na FullSEO
You chọrọ ịbụ ọkacha mma? You ghọtara uru njikarịcha igwe na-achọ ihe, ma chọọ usoro kachasị arụ ọrụ na nke kachasị dị mfe? Want chọrọ itinye ego na otu ndị egosipụtara nke nwere ike ịnapụta nsonaazụ kacha mma enwere ike?
FullSEO bụ ngwugwu kwesịrị ekwesị.
FullSEO bụ Rolls-Royce nke onyinye Semalt SEO. Ọ bụ ihe agbakọrọ agbakọ na atụmatụ SEO zuru oke na isi ya. Get na-enyocha omimi sitere n'aka ndị ọkachamara na - eduzi ụlọ ọrụ, ọ bụghị naanị saịtị gị, mana saịtị saịtị asọmpi na otu ụlọ ọrụ gị si arụ ọrụ. Ọ na - eji usoro SEO dị mma mapụtara ọfụma, ma na - enye mmepe saịtị niile site n'aka otu ndị ọkachamara Semalt ga - anọ na mkparịta ụka mgbe niile. Ihe ngwugwu a na-ekwe nkwa mmụba okporo ụzọ weebụsaịtị na ọnụego ntụgharị dị elu.
Kedu ka FullSEO si arụ ọrụ?
Enwere ike ikewa ngwungwu FullSEO ụzọ ihe anọ: nyocha, njikarịcha ime ụlọ, njikọ njikọ na nkwado.
Otu nyocha nke omimi ga-eduzi otu ndị ọkachamara nke Semalt SEO na onye njikwa Semalt gị. Ihe nyocha a ga - ekpuchi:
Ifyingmata isi okwu dị mkpa ga - adọta ndị na - ege ntị kachasị na nke elele ga - ekwe omume.
Nyochaa ihe owuwu weebụsaịtị na nkesa isiokwu iji hụ otu o si kwekọọ na omume kacha mma SEO na ịhọrọ ibe weebụ nke ga-abụ ebe nkwalite mgbasa ozi weebụsaịtị.
Gchịkọta ozi gbasara weebụsaịtị nke ndị asọmpi gị na akụrụngwa iji nweta ogo Google kachasị elu.
Ozugbo nyocha ahụ zuru, otu ndị ọkachamara SEO, na-arụ ọrụ na tandem ya na onye nrụpụta web Semalt, ga-eme njikarịcha nke weebụsaịtị gị iji mezuo njirisi ogo ọchụchọ ma kpochapụ njehie ma ọ bụ nsogbu ọ bụla nwere ike ijide gị. azu. Usoro nke ime ime ga-ekpuchi:
Ihe okike nke meta meta na mkpado alt sitere na nyocha ndi mbu.
Na-abawanye ma na-eme ka HTML na koodu HTML wee tinye àgwà dị mkpa.
Na-edezi faịlụ robots.txt na .htaccess nke mere na ntanetị gosipụtara na igwe ọchụchọ dị ka o kwesịrị. Eramepụta faịlụ saịtị saịtị maka ndebanye nke ibe nke weebụsaịtị.
Cingtinye bọtịnụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na weebụsaịtị maka itinye aka dị mma.
Ọ bụ ezie na enwere ike ịtụle ya dịka akụkụ nke njikarịcha n'ime, imepụta njikọ dị mkpa iji bụrụ nzọụkwụ n'onwe ya. N'oge njikọ ụlọ, otu anyị nke ndị ọkachamara SEO ga-:
Nyochaa 'ihe ọ linkụ linkụ njikọ' nke weebụsaịtị gị (ọnụ ahịa ihe nchọta ọchụchọ ma ọ bụ nhatanha sitere n'otu peeji gaa n'ọzọ)
Mechie njikọ nke mpụga na-enweghị isi ma ọ bụ na-enyere aka iji chekwaa ịdị mma webpage.
Chọpụta ebe kachasị mma iji tinye njikọ ọhụụ, ọfụma.
Mepụta mmiri ọ linkụ linkụ metụtara njikọ nke achọrọ iji ruo ebe dị elu na Google. Emere nke a site na ijikọ njikọ dị mma na ọdịnaya pụrụiche metụtara isiokwu gị iji bulie ịdị irè nke nkwalite gị.
Adreesị njehie 404 wee wepụ njikọ ndị gbajiri agbaji.
Nke ikpeazụ mana n'ọtụtụ ụzọ, mpempe ihe kachasị mkpa nke ihe omimi FullSEO bụ nkwado na-aga n'ihu nke onye njikwa Semalt onwe gị nyere. Onye njikwa gị ga-enyocha ọganihu nke mkpọsa nke FullSEO gị kwa ụbọchị, na-eme mgbanwe ma na-eme ka itinye ọkwa gị niile. Onye njikwa gị ga:
Nye ozi kwa ụbọchị ma ọ bụ na-arịọ maka mkpesa nke mkpọsa ahụ.
Nye gị ohere ị nweta etiti akụkọ ebe ị nwere ike nyochaa nchịkọta mgbasa ozi zuru ezu.
Onye bu FullSEO?
Emebewo FullSEO maka onye ọ bụla dị njikere iji njikarịcha nchọcha nyocha dị mkpa, ma nnukwu azụmahịa ma ọ bụ obere azụmahịa mpaghara. O bu ngwugwu zuru oke nke ga-enyere gi aka itinye aka ma obu ka aka gi ghara ikpa. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịbawanye okporo ụzọ weebụsaịtị gị, ọnụego ntụgharị gị ma ọ bụ n'ụzọ dị mfe ala ụlọ ọrụ gị, ọ nweghị ngwaọrụ ka mma dị.
AutoSEO na FullSEO: na-eme oku
Ghara ejighị ngwungwu ịhọrọ?
Otu nhọrọ bụ iji ụbọchị iri na anọ bido njem gị , ọ nweghị ọrụ nnwale nnwale nke AutoSEO maka naanị $ 0.99. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ịchọrọ ihe ọzọ, ịnwere ike ịgbanye ya na FullSEO!
Nhọrọ ọzọ bụ ịnụ ihe ndị ahịa anyị nwere ikwu gbasara nhọrọ nke ọ bụla. Lelee peeji nke akaebe nke ndị ahịa anyị maka nghọta ka esi eleta otu ndị ọzọ anya maka otu ngwugwu ọ bụla - uru, ọghọm na ihe ị ga-eche.
Na njedebe nke ụbọchị, n'agbanyeghị ngwugwu ị họọrọ, ị nwere ike inwe obi ike na ma ebe nrụọrụ weebụ gị yana nzukọ gị dum ga-aka ya mma. Ogo Google buliri elu, okporo ụzọ ọzọ, ọnụego mgbanwe dị elu na akara ala kachasị mma niile erute.
Enweghị oge ịla n'iyi. Kpoo ndi otu anyi nwere enyi taa!